“Cristiano wiilkiisa ayaa ka fiican” – Hooyada Ronaldo – Gool FM
“Cristiano wiilkiisa ayaa ka fiican” – Hooyada Ronaldo
Dajiye September 22, 2021
(Manchester) 22 Sebt 2021. Maria Dolores dos Santos Aveiro oo ah hooyada dhashay Cristiano Ronaldo ayaa sheegtay in wiilka ay ayeeyada u tahay ee Cristiano Jr uu ka fiican yahay wiilkeeda, markii uu da’adiisa ahaa.
Wiilka Cristiano Ronaldo wuxuu ciyaaraa kubbadda cagta, waxayna u muuqataa inaan hortaagan nahay hibo cusub marka la eego awoodiisa farsamo ee ka soo muuqatay in ka badan hal fiidiyoow muuqaal oo isaga ah.
Wiilka Cristiano Ronaldo ayaa hadda ka ciyaara akadeemiga Manchester United, kaddib markii uu laacibku ku biiray kooxda reer England xagaagan.
Sida uu qoray wargeyska Marca ee dalka Spain, Maria Dolores dos Santos Aveiro ayaa wareysi uu bixisay waxay ku sheegtay:
“Wiilka Cristiano Ronaldo wuxuu u ciyaaraa si ka wanaagsan aabihiis markii uu da’adiisa ahaa.”
“Cristiano Jr markasta wuxuu dhahaa, Aabe, markaan aadno inaan ku noolaano Lisbon, waxaan rabaa inaan u ciyaaro Sporting Lisbon.”
“In aan ku arko labadooda Sporting Lisbon waxay noqon doontaa riyadayda.”
intaas kaddib Maria Dolores dos Santos Aveiro oo ah hooyada dhashay Cristiano Ronaldo ayaa waxay hadalkeeda ku soo gabagabeysay:
“Markii qof walba uu ka hadlay ku biirista Ronaldo ee kooxda Manchester City, wuxuu igu yiri, hooyo haka walwalin waxa ay dadka sheegayaan sababtoo ah waxaan aadayaa Manchester United.”
Xiddig ka tirsan Kooxda Manchester United oo doonaya inuu bisha Janaayo amaah ku tago... (Waa kee?)
Lewandowski oo ka ka hadlay shaqsiyaadka siaga la barbardhiga Messi iyo Ronaldo… (Muxuuse ka yiri wararka la xiriira inuu la kulmay Florentino Perez?)